आइपिएलः ६३ बलमा सन्जुले बनाए १०२ रन, दिल्लीले जित्यो. – Sabaikoaawaj.com
आइपिएलः ६३ बलमा सन्जुले बनाए १०२ रन, दिल्लीले जित्यो.
बुधबार, चैत्र ३०, २०७३ 8:03:19 AM	मा प्रकाशित
चैत ३०/ इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) क्रिकेटमा दिल्ली डेयरडेभिल्सले पहिलो जित दर्ता गरेको छ । आइपिएल अन्तर्गत मंगलबार राति पुनेमा भएको खेलमा दिल्लीले राइजिङ पुणे सुपरजाइन्ट्सलाई ९७ रनले हरायो । दिल्लीले प्रस्तुत गरेको दुई सय ६ रनको लक्ष्य पछ्याएको पुणेले १६ दशमलव १ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्रै एक सय ८ रन बनाउन सक्यो ।
उसका मयंक अग्रवालले २० , रजत भाटियाले १६ र दीपक चहरले १४ रन बनाउने बाहेक अरुले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन् । दिल्लीका अमित मिश्रा र जाहिर खानले समान तीन तीन तथा प्याट कममिन्सले दुई विकेट लिए । यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको दिल्लीले निर्धारित २० ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा दुई सय पाँच रन बनायो ।
उसका सन्जु सामसोनले ६३ बलमा ८ चौका र पाँच छक्काको सहयोगमा एक सय २, क्रिस मोरिसले नटआउट ३८, ऋषभ पन्तले ३१ तथा साम विलिङग्सले २४ रन बनाए । पहिलो खेलमा हारेको दिल्लीको यो पहिलो जित हो । दुई खेलबाट दुई अंकसहित दिल्ली तेस्रो स्थानमा छ । तीन खेलमा दुई खेल हारेको पुणे दुई अंकसहित पुछारमा छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत्र ३०, २०७३ 8:03:19 AM